Isikhwama | Klever Finance
Konke okudingayo ku-crypto wallet
Ama-cryptocurrencies amakhulu emhlabeni njenge-BTC, ETH, TRX, XRP & LTC, aphethwe ngokuphephile ku-Klever Wallet yakho.
Isikhwama semali esingagcini
Uwena kuphela onokufinyelela idatha ye-akhawunti yakho. Okhiye bakho, ama-cryptos akho. Ayikho i-KYC edingekayo.
Iphelele futhi kulula ukuyisebenzisa
Thumela, yamukela, shintshanisa, finyelela ama-dapp futhi ugxilise ngokuqondile kusuka kuhlelo lokusebenza.
Dinga usizo? I-Klever inesevisi yamakhasimende ehamba phambili kuwo wonke umhlaba we-crypto.
Bamba, Thumela futhi Wamukele I-Crypto Ngokuphepha
Isikhwama semali esiphelele nesisebenziseka kalula ukugcina nokuphatha ama-cryptocurrencies ayintandokazi yakho.
Shintshanisa i-Crypto yakho Ngokushesha
Ngqo ukuhweba zezimali ngaphakathi lokusebenza! Asidingi ukubhaliswa, i-KYC, noma izithombe ozishuthe zona. Thola imiklomelo yezindleko zokushintsha abangani bakho.
Tshala imali manje kuma-cryptocurrencies ngokusebenzisa ikhadi lesikweletu ukuze uthenge ngokuqondile ohlelweni lokusebenza.
Ungaqala ukutshalwa kwezimali kwakho kwe-crypto kusuka ku-$50.
Sebenzisa i-Dapps yakho eyintandokazi
Ngalesi siphequluli, uzokwazi ukufinyelela kuwo wonke amaphrojekthi akho owathandayo we-blockchain. Ukuhambisana ne-Binance Smart Chain, i-Ethereum, i-Tron ne-Kusama blockchains nokunye.
I-Staking ye-POS Blockchains
Thola imali ngokubeka ama-cryptos akho ngokwemvelo ku-blockchain. Okwamanje itholakalela i-Kusama, Reef, Polygon ne-Tron.
I-Wallet staking iyatholakala ku-Tron, KLV, KFI kanye ne-DVK.
Landa i-Klever Wallet
Thola ukuthi kungani i-Klever Wallet iyisinqumo sakho esingcono kakhulu?
Joyina umphakathi wakwa-Klever
Thola Imali nge-Klever